Waxyaabaha kale - Page 5 - Geofumadas
Magaaladaada ciyaarta ciyaarta xigta ee Monopoly
Waxaan ogsoonahay in wadaninimada dalalkeena ku hadasha luqada Isbaanishka ay tahay mid xoogan, maaha kaliya marka xulka qaranka uu ciyaarayo ciyaaraha isreebreebka Koobka Adduunka. Ka hor inta aanan daabacin maqaal ku saabsan "sidii loo codeyn lahaa wax yaabaha dabiiciga ah" oo waxay ii keentay tiro booqasho ah oo aanan fileynin. Waa hagaag, ciyaarta loo yaqaan ...
BlockCAD, si aad noogu xusuusato Lego
Toddobaadkan Google ayaa ina xusuusiyey in kulmay Lego 50 sano, boqortooyadiisa dhaqaale oo uu ku dhashay ka fikradda ah nijaar, kuwaas oo ka dib markii dab baabbi'iyo workshop in 1924 bilaabay dhigaayo ay dhismaha cusub ee qaybo yaryar. Inkastoo ay jireen sawirro hore oo qoryo ah, waxay ahayd illaa 1949 marka ...
25 Qalabka Tiknoolajiyada ugu Fiican
Tani waa hindise ay soo baxay si ay u abaabulaan hanad hal abuur leh kuwa sooco, qaar ka mid ah cirrada madaxiisa u qoro on mawduuca of technology, xeerbeegtida ugu dambeyntii dooran doonaa "The articles fiican 25 technology" sannad kasta. Kuwani waxay noqon karaan wargeysyo, qoraallo ama gelitaan maqal ah oo leh ...
Halkee laga helaa agab iyo cayaaro Mac
Maanta waxaa jira goobo badan oo lagu soo iibsado ciyaaro iyo ilo kale oo loogu talagalay kombuyuutarka, si kastaba ha ahaatee, macmacaan ma aha mid isku mid ah, waana lagama maarmaan in la raadiyo muraayada weyn, marar badan oo aan ku guuleysan. Ciyaaraha Macmalka iyo kuwo kale ayaa ah hab kale oo wanaagsan, oo leh qaab ganacsi oo xiiso leh, inkastoo xoojinta ay tahay ciyaaraha ...
Waxaan dhammeystirnay lix bilood tan iyo markii la bilaabay boosteejada ugu horeysay, inkasta oo si rasmi ah loo bilaabay bishii Oktoobar ee 2007, si aan u dabaaldego waxaan doonayaa inaan daabaco El Vecindario de Geofumadas. 1 Sababta khariidada Khariidada waxaa soo diyaariyay Blogos, oo sameeyey daraasada bilawga ah, hindisada joogtaynta iyo naqshad abuurid. Sidaas ...
Dib-u-eegista naqshadaynta khaanadaha internetka
Waxaa jira bogag badan oo isku dhejiya booqdaha, kuwaas oo ku rajo weyn in aaney helin dhamaadka ganacsiga ilaa dhammaadka goobta iyada oo aan keenin wax natiijo wax soo saar leh. Marka, marka aad horumariso interface interface ee bogga, blog ama portal, waa inaad ka fakartaa gaadiidka ugu yar ee wax ku oolka ah. Aan aragno ...
U codeeya quruxda dabiiciga ah ee 7
Codbixintu waxay u furantahay toddobada dabiiciga ah ee dunida. Meelaha lagu dabaqo waxaa ka mid ah: kaydadka xayawaanka, godadka, lamadegaanka, canyons, khadadka xeebta, kaymaha, goobaha jiilaalka, buuraleyaasha, buuraha, volcanoes iyo kuwa kale. Codbixintu waxay noqon doontaa ilaa 12 ee Diisambar 2008, marka guddi khubaro ah ay dooran doonaan finalka 21 waxaana ka iman doona kuwan ...
Maxaa laga filaayo software gaming ah
Waqtiyadaas oo ay tiknoolajiyada ku xirnaadaan shabakadu waa joogto ah, horumarinta qalabka loogu talagalay ciyaaraha internetka waxay u baahan yihiin dhowr shuruudood oo aan caadi ahayn ee mashaariicda shaqada. Markaad ka hadlaysid ciyaaraha internetka, kiiskan ma taaban karno guud ahaan kuwaani, laakiin halkii ciyaaraha loo yaqaan ...
tabo cusub, dhowr
187 hay'adaha dhaqaalaha ugu weyn
Waa mid macquul ah in ka mid ah 187 shirkadaha waaweyn ee dhaqaalaha, oo ay ka mid yihiin wadamada, waxaa jira shirkado badan oo ka xoog badan dalalkaas; fusiyada midabka leh ee dalal ka mid ah bey'adeena waxay u muuqdaan kuwo muuqaal ah iyo qaar ka mid ah gawaarida iyo tiknoolajiyada oo naga yaqaan. Way cadahay in haddii aad rabto inaad blog dhigto halkan waa ...
Waxay ahayd waqti dheer tan iyo ciyaaraha fursadaha muuqaal ahaan lagu arkayay shabakada; Bilowgii waxay ahayd arin adag sababtoo ah sharciga caalamiga ah ee dareenkan waa mid adag. Maalmahan waxay aad u badan yihiin, tartankuna wuu adkaaday; Waxaa jira dhowr cayaarood oo isboorti oo online ah, oo ay ka mid yihiin backgammon loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo jecel ...
Shaqada xorta ah ee guriga
Shaqada Freelance waa bog internet ah oo loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo boosaska kuwa u shaqeeya si madaxbannaan. Waxaad soo bandhigi kartaa mashaariic ama waxaad ku dari kartaa adeegyadaada mashaariicda la soo jeediyey, haddii dalabku yahay kan ugu waxtarka badan shaqadaada. Meelaha farsamada ayaa ah kuwan soo socda qaarkood. Waxaad ka raadin kartaa qaybaha soo socda: Naqshad Sawireed ...
Waanu soo laabannay, waxaan faraxsanahay 2008
Waa hagaag, sida aan ku dhignay boostada ugu dambeysa, waxaan ku safri lahaa waddankeena ... Diyaargarow farxad Christmas, sanadka cusub oo faraxsan ... si ka fiican sidii wakhti hore ah walo inkasta oo Nancy uu aad ugu fiicnaaday kaarkaaga. Waxay igu soo qaadatay nus maalin si aan u tirtiro faallooyinka, intooda badan waxay bixiyaan dib-u-maalgelinta deynta iyo viagra ... mararka qaarkood waxaan la yaabanahay haddii ...
Qariiradaha Muusikada, Muusikada ugu sareysa ee dalka
Gracenote ma aha shabakad kartooneed, laakiin naqshadiisu waa mid aad u macquul ah. Khariidadaha isku-dhafan ee Flash-ga marka xulashada dalka ay ku tusineyso farshaxanka ugu badan ee dhageysta iyo albaabada. Tusaale ahaan, Mexico, waxaynu maqlaynaa: Luís Miguel Beatles Alejandro Fernández Ricardo Arjona Miguel Bosé Shakira Maná José José Vicente Fernández